काम प्रशिक्षण कार्यक्रम कसरी पाउन | को USAHello | USAHello
काम प्रशिक्षण कार्यक्रम फेला पार्न र कामको लागि सीप प्राप्त
तपाईं नजिकै काम प्रशिक्षण कार्यक्रम फेला पार्न आवश्यक छ? तपाईं नयाँ काम कौशल सिक्न चाहनुहुन्छ? तपाईं एक काम को लागि प्रशिक्षित गर्न सक्छन् विभिन्न तरिका बारे जान्न.
तपाईं कुनै पनि काम प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु गर्नु अघि, तपाईं आधारभूत काम तत्परता कौशल हुन सक्छ. जस्तै, पढ्न र लेख्न सिक्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटर प्रयोग गर, वा भर्न एक काम आवेदन.
कार्यक्रम कहाँ फेला पार्न
पुस्तकालय, विद्यालय, र समुदाय केन्द्र अक्सर कार्यक्रम यी आधारभूत सीप सिकाउन भनेर. त्यसैले एक दान भनिन्छ सद्भावना गर्छ. तपाईं जहाँ तपाईं प्रयोग लुगा र घरेलू सामान खरिद गर्न सक्नुहुन्छ सद्भावना पसलहरु देखेको हुन सक्छ. सद्भावना मान्छे कामको लागि तयार र काम पाउन मदत गर्न आफ्नो पसलबाट पैसा प्रयोग. तिनीहरूले अंग्रेजी र अन्य आधारभूत वर्गहरू प्रस्ताव. तपाईं सिक्न गर्दा तिनीहरूले बाल हेरविचार मद्दत गर्न सक्छ. केही ठाउँमा, सद्भावना विशिष्ट काम प्रशिक्षण कार्यक्रम छ, यस्तो बैंकहरू र अस्पताल मा काम को लागि कौशल रूपमा. कौशल प्रशिक्षण र समर्थन लागि आफ्नो स्थानीय सद्भावना फेला.
आफ्नो स्थानीय काम केन्द्र प्रयोग
हरेक समुदाय मान्छे काम पाउन मदत गर्न काम केन्द्र छ. अमेरिकी अय्यूब केन्द्र अमेरिकी सरकारबाट मुक्त सेवाहरु छन्. काम केन्द्र नाम "CareerOneStop" अनलाइन प्रयोग, तर तिनीहरूले पनि आफ्नो राज्य वा शहरमा एक स्थानीय नाम हुन सक्छ. जस्तै, टेक्सास काम केन्द्र "कर्मचारीहरु समाधान।" भनिन्छ मिनेसोटा काम केन्द्र भनिन्छ "CareerForce।"
काम केन्द्र तपाईं थुप्रै तरिकामा मदत गर्न सक्छ, सहित तपाईं काम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रशिक्षण वा पहुँच दिने. केही काम केन्द्र शरणार्थी र आप्रवासी लागि विशेष काम प्रशिक्षण कार्यक्रम छ! आफ्नो निकटतम काम केन्द्र फेला.
Jobcorps लागि साइन अप
काम कोर जो जवान पुरुष र महिला निःशुल्क शिक्षा र काम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान सरकार कार्यक्रम छ 16 गर्न 24 वर्ष पूरानो. प्रशिक्षण यस्तो CNA रूपमा स्वास्थ्य जब समावेश, दन्त सहायक, फार्मेसी टेक्नीसियन, चिकित्सा प्रशासनिक सहायक, स्वास्थ्य एकाइ संयोजक, र नर्स. अय्यूब कोर बारेमा थप जान्न.
सामुदायिक कलेजहरु विभिन्न पाठ्यक्रम प्रस्ताव सबै उमेरका वयस्कहरूको लागि विद्यालय छन्. तपाईं ईन्जिनियरिङ् मा एक दुई वर्ष पाठ्यक्रम ले गर्न साँझ कक्षाहरू मा अंग्रेजी सिकेर केहि गर्न सक्छन्. सामुदायिक कलेजहरु धेरै काम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम छ. शिक्षण शुल्क विश्वविद्यालय र निजी कलेजहरु भन्दा धेरै कम हो. एक समुदाय कलेज फेला.
एक सिकारु बन्न
एक सिकारु उसले काम गर्दा सीप सिक्छन् जो कसैले छ. Apprentices काम मा तालिम, र तिनीहरूले अक्सर केही कक्षा निर्देशन छ, धेरै. उदाहरणका कार फिक्सिंग वा बिजुली भएकोमा - - तपाईं एक विशिष्ट काम चासो छ भने यो तपाईंको लागि राम्रो बाटो छ तर तपाईं अझै कौशल छैन. श्रम को अमेरिकी विभाग छ apprenticeships सूची.
त्यो सूची शायद मात्र तालिम अवधिको काम सम्भावनाहरू केही समेट्छ. त्यहाँ सधैं कार्यकर्ता खोजिरहेको जसले तपाईंलाई नजिक कारोबार छन्? उनि एक सिकारु रूपमा लिनु र तालिम गर्न इच्छुक हुनेछ, यदि तपाईं तिनीहरूलाई सोध्न सक्छ. अक्सर, एक विश्वसनीय र मेहनती कर्मचारी कुनै पनि कौशल भन्दा हाकिमहरूले थप महत्त्वपूर्ण छ, तिनीहरूले तपाईं कौशल सिकाउन सक्छन् किनभने.
newcomers मदत संगठनहरूको फेला
ठूलो शहर मा, र पनि केही सानो समुदायमा, तपाईं मदत newcomers कामको लागि तालिम संगठन पाउनुहुनेछ. यो एक resettlement एजेन्सी वा संस्थान अन्तर्राष्ट्रिय हुन सक्छ. यसलाई केही करियर मा newcomers गाडिहरु एक परियोजना हुन सक्छ.
यहाँ कामको लागि newcomers तालिम केही ठाउँ हुन्:
बोस्टन: को नयाँ इङ्गल्याण्ड को अन्तर्राष्ट्रिय संस्थान उच्च मागका क्षेत्रमा दुई काम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान गर्दछ: एक आतिथ्य प्रशिक्षण कार्यक्रम र स्वास्थ्य सेवा प्रमाणपत्र.
केन्द्रीय टेक्सास: राजधानी आईडिया वयस्क उच्च मागका करियर मा प्रशिक्षण मद्दत गर्छ.
कोलोराडो: को महिला बीन परियोजना तिनीहरूले काम र जीवन कौशल पाउन गर्दा सुक्खा खाना उत्पादन मा मान्छे को रोजगार.
मिनेसोटा: Communidades संयुक्त Latinas सेवामा (छनकहरू) निःशुल्क प्रदान गर्दछ, 9-स्वास्थ्य मा वयस्कहरूको लागि सप्ताह क्यारियर पाठ्यक्रम, निर्माण र ग्राहक सेवा क्षेत्रहरू
पनि मिनेसोटा मा: को ह्मोङ अमेरिकी साझेदारी उच्च मागका उद्योग कौशल सिकाउन काम प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान गर्दछ.
मेन: को नयाँ अमेरिकी सतत कृषि परियोजना मान्छे किसान बन्न मदत गर्छ.
यूटा: को स्पाइस भान्सा Incubator शरणार्थी खाना ट्रक उद्यमीहरू हुन गाडिहरु.
वाशिंगटन राज्य: परियोजना भोज शरणार्थी र आप्रवासी खाना सेवा उद्योग प्रवेश गर्न गाडिहरु.
प्रविधिमा पेसा लागि रेल - अगाडि लाग्छ
यस अनुसार शरणार्थी Coding परियोजना, त्यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका मा आधा एक लाख भन्दा बढी गणनाको काम रिक्तियों छन्! धेरै शहर बस newcomers लागि कम्प्युटर कोडिंग कार्यक्रम छ.
तपाईं पहिले नै वा कम्प्युटर सीप सिक्न चाहन्छन् भने, कम्प्युटर र इन्टरनेट सुरक्षा मा प्रशिक्षण सोच्न, पनि भनिन्छ cybersecurity. त्यहाँ cybersecurity कौशल संग मान्छे को लागि एक उच्च मांग छ, र यो भविष्यको लागि राम्रो काम हुनेछ. तिमी सक्छौ बारेमा थप प्रविधि जब पढ्न.
सायद तपाईं पहिले नै काम कौशल छ, यस्तो खपरैल वा पाइपलाइन रूपमा, शिक्षा वा नर्सिङ? संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै जब लागि, के तपाईं प्रशिक्षण देखाउन प्रमाणपत्र आवश्यक, त्यसैले तपाईं संयुक्त राज्य अमेरिका मा आफ्नो काम गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रमाणित प्राप्त गर्न, तपाईं शायद एक परीक्षण पारित गर्न हुनेछ. तपाईं परीक्षण लिन अघि शायद तपाईंले केही प्रशिक्षण आवश्यक हुनेछ.
CareerOneStop प्रमाणीकरण खोजकर्ता तपाईंलाई आवश्यक प्रमाणीकरण पाउन मदत गर्न सक्छ.
Upwardly विश्व नव आगन्तुक व्यवसायीक संयुक्त राज्य अमेरिका मा पुन: प्रमाणित प्राप्त गर्छ.
आधारभूत कम्प्युटर सीप कहाँ सिक्न
FindHello मा काम प्रशिक्षण पाउन
शरण कफी परिवर्तन हुँदै जीवन छ